RW Rooble oo fariin adag u diray Fahad Yaasiin iyo Axmed Madoobe | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo fariin adag u diray Fahad Yaasiin iyo Axmed Madoobe
Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble, oo dhawaan ka hadlay arrimo kala duwan oo la xariira doorashooyinka ayaa fariin u diray shaqsiyaad ka danbeeyay baaqashada safarro ku wajahnaa Kismaayo iyo Garbahaaray.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa fariintii ugu adkeyd u diray Taliyaha Nabad-sugidda iyo sir-doonka Qaranka, Fahad yaasiin Xaaji Daahir iyo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Madoobe).
Ra’iisul Wasaaraha oo qabtay shir jaraa’id oo uu uga hadlay qodobo kala duwan ayaa taabtay muhiimadda ay leedahay xorriyadda muwaadiniinta ee socdaalka, wuxuuna carrabka ku dhiftay hay’adda NISA oo uu hoggaamiyo Fahad Yaasiin.
“Warar badan ayaa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad meela kala duwan laga celiyay, uma dulqaadan doono, qofkii falkaas ku kacana tallaabo sharci ah ayaan ka qaadayaa”. Ayuu yiri RW Rooble.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in aan la celin karin duulimaad Garbahaarey ku socda ama mid Kismaayo ku sii jeeda toona, wuxuuna hay’adaha duulista amray in ay ku soo wargaliyaan ciddii isku dayda in hor istaagto safar qorsheysan.
“Waxaa la joogaa xilligii siyaasiyiinta iyo dadka u tartamaya kuraasta aqallada baarlamaamku aadi lahaayeen deegaan doorashooyinkooda, Isu socodka muwaadiniinta iyo diyaaradaha tagaya ama ka imaanaya Gedo, Guud ahaan Jubaland iyo dalka oo dhan lama xayiri karo, waana xaq dustuuri ah.” Ayuu sidoo kale yiri Rooble.
Dhanka kale, wuxuu caddeeyay in la soo gabagabeeyay madmadowgii ka jiray Jubbaland, isagoo carrabka ku dhuftay in uu meel fiican u marayo xalka arrinta guddiyada doorashada ee Gobollada Waqooyi.
Tan iyo billowgii bishii hore, Taliyaha NISA Fahad Yaasiin iyo Kullane Jiis, ayaa waday handadaado, waxayna dhowr shaqsi ka hor istaageen in ay u safraan Garbahaaray, halka Madaxweynaha Jubbaland, uu qudhiisu dhawaan diiday inuu Kismaayo cagaha dhigo, Cabdi Cali Raage, oo la taliye u ah Farmaajo.